Us About - Shanghai kala miiri Hotel Supplies Co., Ltd
S hanghai kala miiri qabriga maryo Limited, sida soo saaraha hoggaamineed iyo dhar xirfadeed hotel ee Bariga Shiinaha a, waxaan diirada aagga this ka badan 15 sano. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ku jiraan: maryaha hotel sariir, shukumaan hotel, waxyaabaha hotel, maryaha F & B. Waxaana lagu siinayaa dhamaystiran xal dharka kooxaha hotel, shirkadaha diyaaradaha, maraakiibta dalxiiska, isbitaalada.
T hrough wakiilada iyo distributors dunida oo dhan our, hadda waxaan siin dharka kooxaha hotel dunida caan badan, sida Intercontinental, Marriott, Hilton, Starwood, Hyatt, Shangri-la iwm Waxaan dhoofiso in ka badan 25 dal.
O ur xafiiska iibka iyo adeegga logistics ku yaalaan magaalada Chinese casriga ah - Shanghai, oo saldhig soo saaridda ee gobolka Central Shiinaha our. Waxaa noo taageeri kharash yar iyo adeeg oolnimada sare.
M ore ka badan 15 sano waayo-aragnimo sahayda hotel, 10+ sano hawlgalka warshad dharka hoteelada xirfadle, kaas oo ku siin doonaa adeegga ugu fiican ee iibka, oo tayo leh oo deggan iyo qiimaha tartan rasmi ah. Waxaan rajeyneynaa in ay iskaashi guul-guul la distributors, wakiilada, kooxaha hotel dunida oo dhan!